PressReader - Isolezwe ngeSonto: 2017-05-28 - Uveza okumenza abe wubhememe ejezini leChiefs
Uveza okumenza abe wubhememe ejezini leChiefs
Isolezwe ngeSonto - 2017-05-28 - EZEMIDLALO -
UMDLALI weKaizer Chiefs uJoseph Molangoane uthi okumenza ahlanye uma egqoke ijezi laMakhosi kungenxa yokuthi ukudlala kuyona bekuvele kuyiphupho lakhe leminyaka nokuthe uma ethola ithuba wazitshela ukuthi uzolibamba ngazo zombili. UMolangoane ofike kwiChiefs ngale sizini evela kwiChippa United utshele Isolezwe ngeSonto ukuthi selokhu aqala ukuhlakanipha wavele waba ngumlandeli waleli qembu. Lo mdlali onomjiko oya phambili uthe inhliziyo yakhe ibihlale inesilokozane ngokuthi kuyobe akuphelele ngokudlala ibhola esigabeni esikhulu uma engakayidlaleli iChiefs. “Okungenza ngikhiphe wonke amangwevu uma ngigqoke umbala weChiefs yingoba ngizithathe ngizifake esimeni somlandeli njengoba nami ngake ngaba nguyena. Lokho kungenza ngivele ngibone kufanele kubekhona engikwenzela abalandeli,” kusho uMolangoane.
Ebuzwa ukuthi ngabe kubaphatha kanjani bengabadlali ukuthi basonge isizini belambatha njengoba ingekho indebe abayinqobile ngale isizini uphendule wathi: “Lapha ngizophinde ngikhulume njengomuntu owayevele engumlandeli weChiefs ngaphambi kokuthi ngidlale ibhola elikhokhelwayo. Phambilini bekungamukeleki ukuthi iChiefs isonge isizini kungekho ngisho indebe eyodwa eyinqobile. Manje kubuhlungu ukuthi akukho esikunqobele abalandeli bethu abazohamba beqhosha ngakho.”
“Ukudlalela iKaizer Chiefs akuyona into elula. Yonke imidlalo esiyidlalayo ithathwa njengeyamanqamu.”
Ngokungabikhona kwakhe ohleni lwabadlali olubizwe nguStuart Baxter uthe umsebenzi wakhe omkhulu ukwiChiefs okunye okusemaceleni kuyozeiqhamukela.
“Ngikholelwa ekutheni abaqeqeshi banamaqhinga abawasebenzisayo uma kudlalwa. Ngakho baye babe nohlobo oluthile lwabadlali abakholelwa kulona ukuthi bazokwazi ukudlala ngomyalelo wabo. Okwami ukuqinisekisa ukuthi ngidlala kahle kwiChiefs, okunye ngale kwalokho kuyozenzekela,” kusho uMolangoane ezakhe osekuyomele zizabalazele ukunqoba iMTN 8 ekusuleni abalandeli izinyembezi kwisizini